မိမိပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့ တောကျတဲ့ လိုမြိုး မိတျဆှစေဈကို သတေဲ့အထိ တနျဖိုးထားပါ – Youth Bar
ဂပြနျနိုငျငံက ဖွဈရပျမှနျလေးတဈခုဖွဈသညျ…အိမျမြားမှာအမြားအားဖွငျ့သဈသားနံရံပါးနှဈခုကို အလယျတှငျနရောလှတျလေးထားပိတျပွီး နံရံထူတဈခုအဖွဈတညျဆောကျတတျကွသညျ။
တဈနေ့ အိမျပွငျရနျ နံရံကိုဖှငျ့ဖကျြလိုကျသောအခါ တောကျတဲ့လေးတဈကောငျအတှငျးပိုငျး၌ တှယျကပျနသေညျကိုတှလေို့ကျရ၏ ။အပွငျမှရိုကျသောသံတဈခြောငျးသညျထိုအကောငျငယျလေး၏ ခွတေဈဖကျကို ထိုးစိုကျဝငျနလေကျြသားတှလေို့ကျရသညျ။
သူဒီမွငျကှငျးလေးကိုမွငျတော့ အတျောလေးသနားသှားသညျ ။ထို့နောကျ သံမှိုကိုသခြောစဈဆေးကွညျ့ရှု လိုကျသောအခါ လှနျခဲ့တဲ့ ၅နှဈခနျ့အခြိနျ ဤအိမျကိုစတငျ တညျဆောကျစဉျကတညျး ရိုကျထားသောသံမှိုဖွဈနသေောကွောငျ့ပငျပို၍ အံ့သွမှငျသကျသှားမိ၏ ။
ဘယျလိုဖွဈတာပါလိမျ့ ။ဒီတောကျတဲ့လေးက နရောမရှနေို့ငျပဲ (၅)နှဈလောကျအသကျရှငျနတောအိုး…ဒီမှောငျမညျးနတေဲ့ နံရံလှတျကွားထဲခွတေဈဖကျသံရိုကျခံထားရလို့ ဘယျမှမသှားနိုငျတော့ပါပဲ…(၅)နှဈတောငျအသကျရှငျနသေေးတာ ..ဟာ! မဖွဈနိုငျတာပဲ ဘာလုပျနခေဲ့တာလဲ ?
ဘယျကဘယျလို အစာစားပွီး အသကျရှငျနခေဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့မေးခှနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့စဉျးစားတှေးကွညျ့လို့ မရတောသညျ့အဆုံးအံ့သွလှနျးကာ အလုပျကိုရပျလိုကျပွီးတောကျတဲ့လေးကိုသာ စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ ။
ဒီလိုနဲ့ နံရံကို နဂိုအတိုငျးလေး ပုံမပကျြအတှငျးကိုသူမွငျနိုငျယုံဟကာ ပွနျကပျလိုကျပွီး တိတျဆိတျစှာ အသာထိုငျစောငျ့ကွညျ့နလေိုကျ၏တျောတျောလေးကွာတော့ အခွားတောကျတဲ့တဈကောငျသညျ ပါးစပျနှငျ့အစာအခြိူ့ကိုကိုကျခြီပွီးရောကျလာသညျ ။ဘယျကရောကျလာမှနျးတော့မသိပေ ။
ထို့နောကျ သံမှိုရိုကျခံထား ရသောအကောငျကိုအစာခှံ့ကွှေးနလေေ၏ ။ထိုမွငျကှငျးလေးကို တှရှေိ့ပွီးနောကျ သူ…အံ့သွမှငျသကျကာ နကျရှိုငျးတဲ့ခံစားမှုကွောငျ့ကွကျသီးမြားပငျထခဲ့ရသညျ ။ငါးနှဈကွာအောငျ သံရိုကျခံထားရတဲ့ တောကျတဲ့လေးရဲ့အဖွဈ မလြော့သောမြှျောလငျ့ခကျြ၊သံရိုကျခံထားရလို့ ခွတေဈလှမျးတောငျမရှနေို့ငျတော့တဲ့ အဖျောဖွဈသူကို ငါးနှဈကွာ ရှာကွှေးခဲ့တဲ့ တောကျတဲ့ကလေးထားမသှား လကျမလြော့သော မြှျောလငျ့ခကျြ ။
စိတျကူးကွညျ့လို့ ရရဲ့လားဗြာ…အဖျောဖွဈသူအပျေါ မြှျောလငျ့ခကျြကို မစှနျ့လှတျဘဲ ငါးနှဈကွာအောငျမဆုတျမနဈ ဂရုတစိုကျအစာရှာကွှေးလာခဲ့တာ…။တဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကိုအမှနျတဈကယျ လိုအပျနတေဲ့အခါ မအားဘူးလို့မပွောလိုကျပါနဲ့လားဗြာ…သငျဟာ တဈစုံတဈယောကျသောသူအတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြ အားကိုးယုံကွညျရာရှငျသနျမှု သူ့အတှကျသငျဟာ ကမ်ဘာတဈခုတောငျ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ ။
ဥပက်ေခာပွုလိုကျတဲ့ အခိုကျအတနျ့ ခဏလေးဟာသငျ့ကို ဘဝတဈခုလုံးပုံပွီးခဈြတဲ့သူတှရေဲ့ နှလုံးသားကို ကြိူးပဲ့စတေယျ။ဖကျြဆီးဖို့က တဈခဏပဲအခြိနျယူရပါတယျ။ဖနျတီးဖို့တော့ ဘဝတဈခုလုံးကွာတတျတယျဆိုတာကို တဈခုခုမပွောမိခငျ အမွဲတမျး သတိတရရှိပါစေ… ။ ။
ဘာသာပွနျ- Thet Khaing
ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်မှန်လေးတစ်ခုဖြစ်သည်…အိမ်များမှာအများအားဖြင့်သစ်သားနံရံပါးနှစ်ခုကို အလယ်တွင်နေရာလွတ်လေးထားပိတ်ပြီး နံရံထူတစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်တတ်ကြသည်။
တစ်နေ့ အိမ်ပြင်ရန် နံရံကိုဖွင့်ဖျက်လိုက်သောအခါ တောက်တဲ့လေးတစ်ကောင်အတွင်းပိုင်း၌ တွယ်ကပ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏ ။အပြင်မှရိုက်သောသံတစ်ချောင်းသည်ထိုအကောင်ငယ်လေး၏ ခြေတစ်ဖက်ကို ထိုးစိုက်ဝင်နေလျက်သားတွေ့လိုက်ရသည်။
သူဒီမြင်ကွင်းလေးကိုမြင်တော့ အတော်လေးသနားသွားသည် ။ထို့နောက် သံမှိုကိုသေချာစစ်ဆေးကြည့်ရှု လိုက်သောအခါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ခန့်အချိန် ဤအိမ်ကိုစတင် တည်ဆောက်စဉ်ကတည်း ရိုက်ထားသောသံမှိုဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ပို၍ အံ့သြမှင်သက်သွားမိ၏ ။
ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့် ။ဒီတောက်တဲ့လေးက နေရာမရွေ့နိုင်ပဲ (၅)နှစ်လောက်အသက်ရှင်နေတာအိုး…ဒီမှောင်မည်းနေတဲ့ နံရံလွတ်ကြားထဲခြေတစ်ဖက်သံရိုက်ခံထားရလို့ ဘယ်မှမသွားနိုင်တော့ပါပဲ…(၅)နှစ်တောင်အသက်ရှင်နေသေးတာ ..ဟာ! မဖြစ်နိုင်တာပဲ ဘာလုပ်နေခဲ့တာလဲ ?
ဘယ်ကဘယ်လို အစာစားပြီး အသက်ရှင်နေခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့စဉ်းစားတွေးကြည့်လို့ မရတောသည့်အဆုံးအံ့သြလွန်းကာ အလုပ်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတောက်တဲ့လေးကိုသာ စောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။
ဒီလိုနဲ့ နံရံကို နဂိုအတိုင်းလေး ပုံမပျက်အတွင်းကိုသူမြင်နိုင်ယုံဟကာ ပြန်ကပ်လိုက်ပြီး တိတ်ဆိတ်စွာ အသာထိုင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်၏တော်တော်လေးကြာတော့ အခြားတောက်တဲ့တစ်ကောင်သည် ပါးစပ်နှင့်အစာအချိူ့ကိုကိုက်ချီပြီးရောက်လာသည် ။ဘယ်ကရောက်လာမှန်းတော့မသိပေ ။
ထို့နောက် သံမှိုရိုက်ခံထား ရသောအကောင်ကိုအစာခွံ့ကြွေးနေလေ၏ ။ထိုမြင်ကွင်းလေးကို တွေ့ရှိပြီးနောက် သူ…အံ့သြမှင်သက်ကာ နက်ရှိုင်းတဲ့ခံစားမှုကြောင့်ကြက်သီးများပင်ထခဲ့ရသည် ။ငါးနှစ်ကြာအောင် သံရိုက်ခံထားရတဲ့ တောက်တဲ့လေးရဲ့အဖြစ် မလျော့သောမျှော်လင့်ချက်၊သံရိုက်ခံထားရလို့ ခြေတစ်လှမ်းတောင်မရွေ့နိုင်တော့တဲ့ အဖော်ဖြစ်သူကို ငါးနှစ်ကြာ ရှာကြွေးခဲ့တဲ့ တောက်တဲ့ကလေးထားမသွား လက်မလျော့သော မျှော်လင့်ချက် ။
စိတ်ကူးကြည့်လို့ ရရဲ့လားဗျာ…အဖော်ဖြစ်သူအပေါ် မျှော်လင့်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ ငါးနှစ်ကြာအောင်မဆုတ်မနစ် ဂရုတစိုက်အစာရှာကြွေးလာခဲ့တာ…။တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအမှန်တစ်ကယ် လိုအပ်နေတဲ့အခါ မအားဘူးလို့မပြောလိုက်ပါနဲ့လားဗျာ…သင်ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူအတွက် မျှော်လင့်ချက် အားကိုးယုံကြည်ရာရှင်သန်မှု သူ့အတွက်သင်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ခုတောင် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။
ဥပေက္ခာပြုလိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့် ခဏလေးဟာသင့်ကို ဘဝတစ်ခုလုံးပုံပြီးချစ်တဲ့သူတွေရဲ့ နှလုံးသားကို ကျိူးပဲ့စေတယ်။ဖျက်ဆီးဖို့က တစ်ခဏပဲအချိန်ယူရပါတယ်။ဖန်တီးဖို့တော့ ဘဝတစ်ခုလုံးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကို တစ်ခုခုမပြောမိခင် အမြဲတမ်း သတိတရရှိပါစေ… ။ ။
ဘာသာပြန်- Thet Khaing
သားသမီးကို ခဈြရငျ ခိုငျးပါ… “ခြီမထားနဲ့ ခြိသှားမယျ”(မိဘမြား ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျကွညျ့ပါ)